चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्दै मेयर , मेथलाङमा एक घर एक धारा! -
फिर्केखोला बन्धक राखेर नेकपाले माग्यो भोट, पोखरा महानगर मतियार
जहाँ धेरै राजनितीक दलहरु हुन्छन् ,त्यहाँ विकासको कामले गति लिनै सक्दैन । –स्वतन्त्र उमेदवार बास्तोला
उम्मेदवार खेमराज पौडेल अर्मला जाँदा सडकमा अवरोध
२५ करोड लगानीमा नेपालकै ठुलाे बायो ग्यास उद्योग सञ्चालन
देश विकासको महा अभियानको सारथी बन्छु ः विद्याभट्टराई अधिकारी
छैठौं स्याङ्जा महोत्सव हुने
धार्मिक संम्पदाहरु राष्ट्रका सम्पत्ति हुन ः उपप्रमुख गुरुङ
कुसंस्कृत राजनीतिले मजदुर र किसानलाई दास बनायो : उम्मेदवार केसी
नेपाली काँग्रेस बिपिको चुनावी प्रचार प्रसार तिव्र
कांग्रेस निर्वाचन कमान्डार नै नेकपामा
starnepalnews - Pokhara Hotline National Daily
चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्दै मेयर , मेथलाङमा एक घर एक धारा!
समाचारपोखरा र सेरोफेरो
By Pokhara Hotline	 Last updated Jun 10, 2019
पोखरा, २७ जेठ
लिफ्टिङ प्रविधि मार्फत् पोखरा १८ मेथलाङमा एक घर एक धारा उपलब्ध गराइएको छ । पोखरा महानगरपालिका र अन्य सरकारी निकायको आर्थिक सहयोगमा कुसुन्डे मेथलाङ लिफ्टिङ खानेपानी योजना सम्पन्न भएको हो ।
३५ लाखको लागतमा सम्पन्न भएको उक्त योजनाबाट ४० घर परिवारलाई एक÷एक धारा उपलब्ध गराइएको कुसुन्डे मेथलाङ लिफ्टिङ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नमराज सुवेदीले जानकारी दिए । उक्त कार्यको लागि महानगरले २२ लाख ७० हजार सहयोग गरेको छ ।
उनका अनुसार सराङकोटकै कुसुन्नेको मूलबाट पानी लिफ्टिङ गरी मेथलाङमा पानी वितरण गरिएको हो । मूल भएको ठाउँमा कलेक्सन, रिजर्भ ट्यांकी र पानी तान्ने मोटर राखिएको सुवेदीले जानकारी दिए । पानी मेथलाङमा पु¥याउन करिब ६ सय ५० मिटर जीआई पाइप विछ्याइएको र मेथलाङमा ५० हजार लिटर क्षमताको पानी ट्यांकी बनाएर घर÷घरमा पानी वितरण गरिएको कार्यक्रम संयोजक गणेश देवकोटाले बताए ।
साविक सराङकोट ६ मा पर्ने मेथलाङमा गोठादीबाट पानी ल्याइएको भएपनि प्रर्याप्त थिएन ।एउटा धाराबाट ८ घरलाई पानी पु¥याउनु पर्ने वाध्यता थियो । पुरानो खानेपानी लाइन भएकाले बेला÷बेलामा समस्या आउने र पानी लिनका लागि डेड घण्टा टाढा स्यानीमूल सम्म पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । अब भने पानीको समस्या हटेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । उक्त खानेपानी आयोजना जेठ ३२ गते पोखरा महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जिसीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकामा गाभिएका साविकका गाविसमा पिउने पानीको समस्या भएका ठाउँहरुमा एक घर एक धारा पु¥याउने गरी काम अघि बढेको प्रमुख जिसीले बताए । विभिन्न वडामा गरी चालु आर्थिक वर्षमा ४४ वटा खानेपानीका योजना मार्फत् एक घर एक घारा पु¥याउने काम अगाडि बढेको हो । योजना मध्ये केही पुराना खानेपानीका योजनालाई मर्मत गर्ने कार्यपनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्वाचनको बेला गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार नै महानगरमा पानीको समस्या भएका ठाउँमा एक घर एक धारा पु¥याउने कार्यलाई आगामी वर्षको बजेटमा पनि प्राथमिकता दिइने जिसीले बताए ।
Pokhara Hotline 1760 posts0comments
पोखरामा अर्गानिक हाटबजार
“म माया गर्न पनि सक्दिन र नगर्न पनि सक्दिन”
निर्मलपोखरीबासी भन्छन् , विद्या साझा उम्मेदवार
भ्रष्टाचार र विश्वासघात गर्दिन : उम्मेदवार केसी
राप्रपाको चुनावी अभियान जारी
सपना नेताको होइन जनताको पूरा हुनुपर्छः उम्मेदवार धर्मराज
पोखराको किङग्स लाउन्जमा नरेन लिम्बूको शनिबार कन्सर्ट
कांग्रेस कमजोर हुँदा सबै क्षेत्र कमजोर ः खाण
पोखराका सुकुम्बासी भन्छन् मन र मत बदल्दैनौं
सरकारका कारण संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र खतरामा : कोइराला
मौजावासीले धर्मराजलाई भनेः खोजेजस्तै नेता पायौं
‘कांग्रेसबाट आजित भयौं, अबको भोट नेकपालाई’